LG dia hamarana ny famokarana smartphone amin'ity taona ity - SmartMe
LG dia hamarana ny famokarana smartphone amin'ity taona ity
Navoakan'i	 Paweł M.
lg, finday avo lenta
Ireo tatitra rehetra niseho tamin'ny haino aman-jery farany teo dia nivadika ho mifanaraka amin'ny zava-misy. Vao avy nanambara ny solontenan'ny LG fa nisy ny fanapahan-kevitra noraisina tamin'ny fandaozana ny famokarana smartphone. Ny departemanta finday dia nitondra fatiantoka lehibe.
Ny departemanta finday ao LG dia niady tamin'ny olana maro nandritra ny fotoana ela, ary nitombo isam-bolana ny fatiantoka ara-bola. Ny birao fitantanana ny mpamokatra Koreana Tatsimo dia nanambara tamin'ny fanambarana ofisialy fa ny fahalalana sy ny traikefa azo nandritra ny taona maro dia hampiasaina amin'ny tetikasa vaovao maro. Tanjona ny hanamafisana ny fifaninanana amin'ny sehatry ny orinasa hafa. Iray amin'ireo tanjona kendrena ny, ankoatry ny hafa, ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny haitao 6G.
Fanaparitahana departemanta finday avo lenta amin'ity taona ity
Mbola ho azo amidy ny finday finday avo lenta. Ny tompona telefaona koa dia afaka miantehitra amin'ny fanohanana aorian'ny fivarotana ary manantena ny fanavaozana ny lozisialy. Haharitra hafiriana izany? Raha ny filazan'ny solontenan'ny orinasa dia miankina amin'ny faritra izany. Ny famonoana ny sampana finday dia haharitra hatramin'ny faran'ny Jolay 2021. Tena azo atao ny mividy modely finday smartphone na dia aorian'ity daty nifanarahana ity aza.
LG Elatra / sary: ​​LG
Ny tompon'ny orinasa dia te-hamadika ny fironana ratsy, fa ny maodely toa ny LG Vvett sy Wing dia tsy nahomby tamin'ny fahombiazana. Ny fanambaràna ny tabilao horonan-taratasy, izay heverina fa hanova ny tsena sy ny fahatsapana ny marika mihitsy, dia tsy nanatsara ny toe-javatra. Hita fa ny vahaolana vaovao dia tsy nampirisika ny mpanjifa Apple na Samsung hiverina amin'ny tolotra LG. Ny ambin'ny mofomamy dia nozarain'ny mpamokatra toa ny OnePlus sy Xiaomi.
Inona avy ireo tetikasan'ny orinasa?
Ity fanapaha-kevitra stratejika ity dia ny hahafahan'ny orinasa Koreana Tatsimo hifantoka amin'ny sehatra hafa, mampanantena mitovy. Anisan'izany ny famokarana singa elektrika, robotika, vahaolana an-trano ary serivisy fandraharahana. Ny teknolojia rehetra novolavolaina tato anatin'ny taona vitsivitsy dia hampiasaina amin'ny tetikasa efa misy sy ho avy.
Apple Car dia haorina amin'ny fiaraha-miasa amin'ny LG?
Hitan'ny gazety Koreana Tatsimo The Korea Times fa akaiky hanasonia fifanarahana amin'ny orinasa noforonin'i LG sy Magna i Apple. Ny goavambe Cupertino dia mikasa ny hanolotra ny fiarany marani-tsaina indrindra ...
Ny ultrabooks LG farany dia misy izao. Miseho tonga lafatra izy ireo
Hatramin'izao, LG dia tsy nifandray akaiky tamin'ny solosaina. Na izany aza, niova izany ary vao nanolotra ny solosaina findainy manaraka ny orinasa nanomboka ny taona 2021. Ny solosaina finday dia miantoka ny fampiononana, ny fahombiazana ary ...
Adala i Huawei ary manolotra vokatra vaovao maro
huawei, premieres, entana, finday avo lenta
Huawei dia nanolotra ny vokatra farany fanaony any Polonina androany. Anisan'ireny ny headphones TWS FreeBuds 4i, monitor 23'8 "ary andalana router WiFI Mesh. Huawei dia manomboka amin'ny vokatra vaovao Andao hanomboka amin'ny headphones FreeBuds 4i, izay ...
LG Styler - fitafiana natokana ho an'ny areti-mifindra
lg, LG Styler, Fitaovana an-trano mahay, fitafiana
Andao hiverina amin'ny martsa 2020 isika, rehefa nanomboka ny areti-mandringana. Iza amintsika no tsy namono ny tanana tamin'io tamim-pitaintainanana tamin'io fotoana io? Firy ny meme momba ny fandotoana ny zava-drehetra? Fiara. Tanana am-baravarana. Ny tenda. Tadidiko ...
Oppo manova ny anaran'ny finday avo lenta
OPPO, finday avo lenta
Oppo dia namoaka finday maro vao haingana ary, raha ny marina, sarotra ny manaraka azy ireo. Matetika ireo fitaovana ireo ihany no soloina anarana eny an-tsena, izay fomba fanao mahazatra sy malaza indrindra. Tato ho ato ...
Nanjakazaka tanteraka tamin'ny tsenan'i Japon i Apple
paoma, iPhone, finday avo lenta
Ireo mpandalina IDC ao amin'ny tatitra momba ny tsenan'ny smartphone any Japon dia nanondro mazava fa afaka mirehareha amin'ny fanjakazakana tanteraka eto amin'ity tsena ity i Apple. Ny data dia mandrakotra ny taona 2020 manontolo sy ny telovolana fahaefatra. Fanjakan'ny Apple tanteraka hatramin'ny ...
Apple no mitana ny laharana voalohany amin'ny fivarotana ao anatin'ny efa-taona!
Ny orinasa mpandalina Gartner dia nanome anay tatitra momba ny varotra smartphone manerantany tamin'ny telovolana fahaefatra tamin'ny taon-dasa. Apple dia teo an-tampon'ny laharana fivarotana finday avo lenta, izay no loka voalohany toy izany hatramin'ny 2016. Niverina i Apple ...
LG dia nanomboka niasa tamin'ny efijery ho an'ny iPhone azo nakambana
paoma, iPhone, lg
Vao tsy ela akory izay, misy tatitra bebe kokoa momba ireo iPhone azo aforitra. Araka ny DigiTimes, LG dia tompon'andraikitra amin'ny fampiroboroboana ny efijery izay miseho amin'ny iPhone mivalona. LG dia hikarakara ny efijery ho an'ny iPhones Pod azo soloina ...
Airplay2 dia misy amin'ny LG TV fahizay!
paoma, lg, fahitalavitra
Teknolojia Apple ho an'ny tsy misy tariby - ny famindrana sary AirPlay2 dia handeha amin'ireo modely LG taloha! LG dia mitazona ny tokiny! Nilaza ny solontenan'ny LG fa ho feno fitaovana teknolojia AirPlay2 sahady amin'ny lohataona 2020 ny seho fahitalavitra azon'izy ireo.
LG dia miasa amin'ny robot hiadiana amin'ny coronavirus
Manatevin-daharana ireo orinasa miady amin'ny coronavirus i LG. Sam, tamin'ny fotoanako dia nahazo sarontava avy amin'ny LG aho. Na izany aza tsy izany no farany. Amin'ny fiandohan'ity taona ity, ny robot dia tokony hamely ny tsena, izay natao hamonoana olona be ...